लगातार चौथो जितको खोजीमा नेपाल, भुटानविरूद्ध कस्ताे रहला प्रदर्शन ? | Sagarmatha TV
लगातार चौथो जितको खोजीमा नेपाल, भुटानविरूद्ध कस्ताे रहला प्रदर्शन ?
विश्व ट्वान्टी–२० एसिया छनोट
काठमाडौं । मलेसियामा जारी विश्व ट्वान्टी–२० एसिया छनोट ‘बी’ अन्तर्गत नेपालले आफ्नो चौथो खेलमा आज भुटानको सामना गर्दैछ । खेल मलेसियाको युकेएम क्रिकेट ओभल मैदानमा स्थानीय समयअनुसार विहान १० बजेबाट खेल शुरु हुनेछ । लगतार तेस्रो जित हात पार्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल चौथो खेलमा जितको अपेक्षा सहित मैदानमा उत्रिने छ ।
नेपाली खेलाडी लयमा रहेका कारण भुटानविरुद्धको खेलमा पनि सहज जितको अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो खेलमा म्यानमार र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई समान ८ विकेटले पराजित गरेको नेपालले तेस्रो खेलमा थाइल्याण्डलाई डिएलए मेथोडका आधारमा १ सय ४० रनको फराकिलो अन्तरले जित दर्ता गरेको थियो ।
अाजको खेल पश्चात नेपालले चीन र सिंगापुरसँग खेल्नेछ । तेस्रो खेलमा नेपाली टोलीका करण केसीको उत्कृष्ट अलराउण्डर प्रर्दशन र बलिङमा सन्दीप लामिछानेको चामत्कारिक प्रदर्शनले नेपालले शानदार जित हात पारेको हो । उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित मलेसिया पुगेको हो ।
प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, चीन, सिंगापुर, भुटान, थाइल्यान्ड र म्यानमार रहेका छन् । प्रतियोगितामा नेपाल भन्दा अन्य टोली तुलानात्मक रुपमा कमजोर रहेका छन् । यस उप क्षेत्रबाट शीर्ष ३ टोली एसियाली क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिताका लागि छनोट हुने छन् । पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रको छनोटबाट छानिएका ३–३ देशले क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिता खेल्नेछन् । यसअघि नै एसिया ‘ए’ उप–क्षेत्रबाट (पश्चिमी )युएई, कुवेत र कतार छनोट भैसकेका छन् । जसबाट उत्कृष्ट २ टिमले टि–२० बिश्वकपको ग्लोबल छनोट खेल्ने छन् ।
नेपाली टोलीमा पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल (उपकप्तान ), अनिल कुमार साह, बसन्त रेग्मी, बिनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करन केसी, ललित भण्डारी, ललितनारायण राजबंशी, मोहमम्द आरिफ शेख, प्रदिप ऐरी, सन्दीप लामिछाने, शरद भेसावकर, सोमपाल कामी रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा जगत टमाटा र ब्यबस्थापकमा रमन शिवाकोटी छन् ।